လွန်ခဲ့တဲ့၁၀ နှစ်လောက်က ပုံကို ကြည့်ရင်းအကြံကောင်းပေးလိုက်တဲ့ သန္တာလှိုင်
၁၀စုနှစ်တစ်ခု လောက်ကွာသွားတဲ့ ပုံတွေကိုကြည့်ရင်း သန္တာလှိုင်က အကြံကောင်းပေးလိုက်ပါတယ်
23 Apr 2018 . 9:37 AM
သူမရဲ့ ၁၀စုနှစ်တစ်ခု လောက်ကွာသွားတဲ့ ပုံတွေကိုကြည့်ရင်း သန္တာလှိုင်က အကြံကောင်းပေးလိုက်ပါတယ်
မော်ဒယ် သန္တာလှိုင်က သူမရဲ့ အရင်ကပုံတွေကိုကြည့်ရင်း ခန္ဓာကိုယ်လှပကျစ်လစ်ချင်တဲ့ အစ်မတွေ ၊ ညီမလေးတွေ အတွက် အခုလိုအကြံပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
“ကျန်းမာချင်တယ် ဆိုရင်တော့ အစားအသောက်ကို လိုအပ်သလောက် မစားပဲ လေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန် မလုပ်ပဲ လူက လှပ ကျစ်လျစ်နေအောင် ထိန်းထားလို့ ရမယ့်နည်း ပေးပါလို့… ကျွန်မကို မေးနေသူများ ရှိပါတယ်။
ပြောချင်တာက ဖြစ်စဉ် ပျက်စဉ် အင်မတန် နှေးတဲ့ သံ သတ္ထုတို့နဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ကားတို့ အိမ်တို့လို အရာဝတ္ထုမတွေတောင် လစဉ် နှစ်စဉ် ထိန်းသိမ်းနေရတာ မဟုတ်လား? ကားအကောင်း ဝယ်စီးရင်တောင် လောင်စာစီ အကောင်းစားကို ဈေးကြီးပေးပြီး ဝယ်ထည့်သေးတာပဲ မဟုတ်လား?
၂၀၀၉ နဲ့ ၂၀၁၈ ကပုံကို နှိုင်းယှဉ်ပြထားပုံ
ကျွန်မတို့ ခန္ဓာကိုယ်က ဖြစ်စဉ်ပျက်စဉ် အင်မတန် မြန်တဲ့ cell တွေနဲ့ လုပ်ထားတာပါ။ ပြီးတော့ ကားတွေလို spare parts တွေ ဝယ်ပြီး လဲလို့ရတဲ့ ခေတ်ကိုလဲ မရောက်သေးပါဘူး။ လူ့ဘဝသက်တန်း တစ်လျှောက်လုံး ဒီခန္ဓာကြီးတစ်ခုထဲနဲ့ ဆက်ပြီး လှူပ်ရှားရအုံးမှာ ဆိုတော့ service က နေ့တိုင်း ဝင်ရမှာပါ။ ဒါကြောင့် ကျွန်မသင်တန်းကိုတောင် T’s Workshop လို့ နာမည် ပေးထားတာ…. ရှောင်လွဲလို့ မရတဲ့ တာဝန်အရ ဒီခန္ဓာကြီးကို အပတ်စဉ် ထိန်းသိမ်းရကောင်းမှန်းသိတဲ့ လူတွေအတွက် ဝပ်လျှော့ လာထိုးဖို့ပါ….
၂၀၀၈ နဲ့ ၂၀၁၈ ကို နှိုင်းယှဉ်ပြထားပုံ
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လောက်တုန်းက ကျန်းမာရေး အသိတွေ မကြွယ်ဝခင်က အစားကို လျှော့စား၊ အချိန်မှန် မစား… တစ်ခါတစ်လေ မစားပဲနေ… အဲ့ဒါတွေနဲ့ လူက ပိန်ချောင်ပြီး တွဲလို့ တွန့်နေတဲ့ မျက်နှာ ကိုယ်လုံးနဲ့ ပုံတွေကို အရင်ကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အသက် ၃၀ မှာ ဒီလာက်ကျန်တာ သိပ်မဆိုးပါဘူးလို့ လျှော့လျှော့ ပေါ့ပေါ့ တွေးပြီး ကျေနပ်နေခဲ့တာပေါ့။ အခုပုံနဲ့ ယှဉ်ကြည့်မှ OMG ငါ အဲ့ဒီတုန်းက တော်တော် အိုကျသွားတာပဲ ဆိုတာ သုံးသပ်မိတယ်။ အားလုံးလဲ ယှဉ်ကြည့်လို့ရအောင် မရှက်မကြောက် တင်ပေးပါမယ်။
ပြောချင်တာက လေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန်လုပ်ပါ… အိပ်ရေးဝအောင် အိပ်ပါ…. ရေကို သေချာ များများသောက်ပါ…. စားသင့်တဲ့ သန့်ရှင်းတဲ့ အစာတွေစားပါ…. ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတလေးတွေ လေ့လာပါ…..
၂၀၀၈ နဲ့ ၂၀၁၈ က ပုံတွေကို နှိုင်းယှဉ်ပြခဲ့ပုံ
အစားချည်းလျှော့စားပြီး ပိန်အောင်ကြိုးစားလို့ မပိန်ပဲ လှသင့်သလောက် မလှလာတဲ့ ညီမလေးတွေ အမကြီးတွေကို အသိပေးချင်တာပါ။ ၁၀ စုနှစ် တစ်ခု ကွာသွားတဲ့ ကျွန်မကိုပဲ ကြည့်ပါလို့….
လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ရင်တော့ လောင်စာဆီဖြစ်တဲ့ သန့်ရှင်းတဲ့ အစားအသောက်က လိုကို လိုအပ်ပါတယ်။ မစားပဲ မနေကြပါနဲ့လို့… နော်” ဆိုပြီးတော့ သူမ က အခုလိုဝေမျှခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Photo Credit:Thandar Hlaing Facebook
သူမရဲ့ ၁၀စုနှဈတဈခု လောကျကှာသှားတဲ့ ပုံတှကေိုကွညျ့ရငျး သန်တာလှိုငျက အကွံကောငျးပေးလိုကျပါတယျ
မျောဒယျ သန်တာလှိုငျက သူမရဲ့ အရငျကပုံတှကေိုကွညျ့ရငျး ခန်ဓာကိုယျလှပကဈြလဈခငျြတဲ့ အဈမတှေ ၊ ညီမလေးတှေ အတှကျ အခုလိုအကွံပေးလိုကျတာပဲဖွဈပါတယျ။
“ကနျြးမာခငျြတယျ ဆိုရငျတော့ အစားအသောကျကို လိုအပျသလောကျ မစားပဲ လကေ့ငျြ့ခနျး ပုံမှနျ မလုပျပဲ လူက လှပ ကဈြလဈြနအေောငျ ထိနျးထားလို့ ရမယျ့နညျး ပေးပါလို့… ကြှနျမကို မေးနသေူမြား ရှိပါတယျ။
ပွောခငျြတာက ဖွဈစဉျ ပကျြစဉျ အငျမတနျ နှေးတဲ့ သံ သတ်ထုတို့နဲ့ တညျဆောကျထားတဲ့ ကားတို့ အိမျတို့လို အရာဝတ်ထုမတှတေောငျ လစဉျ နှဈစဉျ ထိနျးသိမျးနရေတာ မဟုတျလား? ကားအကောငျး ဝယျစီးရငျတောငျ လောငျစာစီ အကောငျးစားကို ဈေးကွီးပေးပွီး ဝယျထညျ့သေးတာပဲ မဟုတျလား?
၂၀၀၉ နဲ့ ၂၀၁၈ ကပုံကို နှိုငျးယှဉျပွထားပုံ
ကြှနျမတို့ ခန်ဓာကိုယျက ဖွဈစဉျပကျြစဉျ အငျမတနျ မွနျတဲ့ cell တှနေဲ့ လုပျထားတာပါ။ ပွီးတော့ ကားတှလေို spare parts တှေ ဝယျပွီး လဲလို့ရတဲ့ ခတျေကိုလဲ မရောကျသေးပါဘူး။ လူ့ဘဝသကျတနျး တဈလြှောကျလုံး ဒီခန်ဓာကွီးတဈခုထဲနဲ့ ဆကျပွီး လှူပျရှားရအုံးမှာ ဆိုတော့ service က နတေို့ငျး ဝငျရမှာပါ။ ဒါကွောငျ့ ကြှနျမသငျတနျးကိုတောငျ T’s Workshop လို့ နာမညျ ပေးထားတာ…. ရှောငျလှဲလို့ မရတဲ့ တာဝနျအရ ဒီခန်ဓာကွီးကို အပတျစဉျ ထိနျးသိမျးရကောငျးမှနျးသိတဲ့ လူတှအေတှကျ ဝပျလြှော့ လာထိုးဖို့ပါ….
၂၀၀၈ နဲ့ ၂၀၁၈ ကို နှိုငျးယှဉျပွထားပုံ
လှနျခဲ့တဲ့ ၁၀ နှဈလောကျတုနျးက ကနျြးမာရေး အသိတှေ မကွှယျဝခငျက အစားကို လြှော့စား၊ အခြိနျမှနျ မစား… တဈခါတဈလေ မစားပဲနေ… အဲ့ဒါတှနေဲ့ လူက ပိနျခြောငျပွီး တှဲလို့ တှနျ့နတေဲ့ မကျြနှာ ကိုယျလုံးနဲ့ ပုံတှကေို အရငျကတော့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အသကျ ၃၀ မှာ ဒီလာကျကနျြတာ သိပျမဆိုးပါဘူးလို့ လြှော့လြှော့ ပေါ့ပေါ့ တှေးပွီး ကနြေပျနခေဲ့တာပေါ့။ အခုပုံနဲ့ ယှဉျကွညျ့မှ OMG ငါ အဲ့ဒီတုနျးက တျောတျော အိုကသြှားတာပဲ ဆိုတာ သုံးသပျမိတယျ။ အားလုံးလဲ ယှဉျကွညျ့လို့ရအောငျ မရှကျမကွောကျ တငျပေးပါမယျ။
ပွောခငျြတာက လကေ့ငျြ့ခနျး ပုံမှနျလုပျပါ… အိပျရေးဝအောငျ အိပျပါ…. ရကေို သခြော မြားမြားသောကျပါ…. စားသငျ့တဲ့ သနျ့ရှငျးတဲ့ အစာတှစေားပါ…. ကနျြးမာရေးနဲ့ ပတျသကျတဲ့ ဗဟုသုတလေးတှေ လလေ့ာပါ…..
၂၀၀၈ နဲ့ ၂၀၁၈ က ပုံတှကေို နှိုငျးယှဉျပွခဲ့ပုံ
အစားခညျြးလြှော့စားပွီး ပိနျအောငျကွိုးစားလို့ မပိနျပဲ လှသငျ့သလောကျ မလှလာတဲ့ ညီမလေးတှေ အမကွီးတှကေို အသိပေးခငျြတာပါ။ ၁၀ စုနှဈ တဈခု ကှာသှားတဲ့ ကြှနျမကိုပဲ ကွညျ့ပါလို့….
လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျရငျတော့ လောငျစာဆီဖွဈတဲ့ သနျ့ရှငျးတဲ့ အစားအသောကျက လိုကို လိုအပျပါတယျ။ မစားပဲ မနကွေပါနဲ့လို့… နျော” ဆိုပွီးတော့ သူမ က အခုလိုဝမြှေခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။